दसैं लक्षित दश पुस्तक
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, १७ असोज
पछिल्लो केही वर्षयता दशैंलक्षित पुस्तक–बजार फस्टाएको देखिन्छ । दसैं र तिहारको लामो बिदालाई केन्द्रमा राखेर प्रकाशन गृहहरूले किताब प्रकाशन गर्ने गर्छन् । मदन पुरस्कार वितरण हुने महिना पनि यही भएकाले दसैं आसपास धेरै किताबको चर्चा एकैसाथ हुने गर्छ ।
यस वर्ष पनि अधिकांश प्रकाशन गृहले दसैंअगाडि नयाँ पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । चल्तीका प्रकाशन गृहहरू ‘फाइन प्रिन्ट’, ‘फिनिक्स बुक्स’ र ‘बुकहिल प्रकाशन’ले दसैंअघि नयाँ किताब सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसबाहेक सांग्रीला बुक्स, इन्डिगो इंक, शिखा बुक्सलगायतका प्रकाशन गृह पनि नयाँ किताब प्रकाशन गर्ने होडमा सामेल छन् । यस लेखमा विभिन्न प्रकाशन गृहले दसैंअघि प्रकाशन गरेका शीर्ष दश पुस्तकको चर्चा गरिएको छ ।
१. सन्दुक रुइतको जीवनी
विश्वविख्यात नेत्रचिकित्सक डा. सन्दुक रुइतको जीवनी ‘द बेयरफुट सर्जन’ नेपालीमा अनुवाद भएर प्रकाशित भएको छ । अस्ट्रेलियन पत्रकार अली ग्रिपरले लेखेको उक्त किताब खगेन्द्र संग्रौलाले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् । पुस्तकमा रुइतका जीवनमा आएका उतारचढाव, सफलता, आरोहअवरोह एवम् तिलगंगा आँखा अस्पतालको संघर्षको कथा समेटिएको छ । फाइन प्रिन्टले प्रकाशन गरेको सो पुस्तकको मूल्य ५ सय ५० रहेको छ ।
२. गुलाबी उमेर
चर्चित आख्यानकार अमर न्यौपानेको तेस्रो उपन्यास ‘गुलाबी उमेर’ पनि दसैंअगाडि प्रकाशित उपन्यास हो । मदन पुरस्कार विजेता आख्यानकार न्यौपानेले किशोरावस्था र त्यसको भव्यता समेटेर ‘गुलाबी उमेर’ लेखेका छन् । फाइन प्रिन्टले नै प्रकाशन गरेको ‘गुलाबी उमेर’ को बजार मूल्य ४ सय ९८ राखिएको छ ।
साहित्यकार सरुभक्तले १५ वर्षपछि लेखेको सातौं उपन्यास ‘प्रतिगन्ध’ दसैंअघि निस्किएको अर्को चर्चित किताब हो । अमेरिका र त्यहाँ बस्ने नेपालीको कथा–व्यथा समेटेर लेखिएको ‘प्रतिगन्ध’लाई बुकहिल प्रकाशनले बजारमा ल्याएको हो । पुस्तकको मूल्य ५ सय ९९ रहेको छ ।
‘हंस’ डा. सञ्जीव उप्रेतीको दोस्रो उपन्यास हो । १२ वर्षअघि ‘घनचक्कर’ उपन्यासबाट चर्चामा आएका प्राध्यापक उप्रेती अहिले विश्वविद्यालयबाट अवकाशप्राप्त जीवन बिताइरहेका छन् । बुकहिल प्रकाशनले नै प्रकाशन गरेको ‘हंस’को मूल्य ४ सय रूपैयाँ रहेको छ ।
५. बैरागी काइँलाका संकलित कविता
गद्य कविताका सर्वोच्च कवि मानिने बैरागी काइँला अत्यन्त थोरै कविता लेख्ने कविमा पर्छन् । काइँलाले जीवनभरमा लेखेका सम्पूर्ण गीत र कविता यस संग्रहमा समेटिएको छ । । २०३० सालमा ‘बैरागी काइँलाका कविता’ प्रकाशन गराएका कवि काइँलाको यो संकलनलाई साहित्यकार राजन मुकारूङले सम्पादन गरेका हुन् । फिनिक्स बुक्सले प्रकाशन गरेको संग्रहको मूल्य ३ सय ९५ राखिएको छ ।
६. सुनको पहाड
आख्यानकार विष्णु भण्डारीद्वारा लिखित ‘सुनको पहाड’ जनयुद्ध र त्यसको त्रासदीबारे लेखिएको उपन्यास हो । कविता र आख्यान दुवै विधामा बराबरी कलम चलाउने भण्डारीको यो दोस्रो उपन्यास हो । यसअघि उनको ‘पहेँलो घाम’ उपन्यास पाठकमाझ चर्चित थियो । फिनिक्स बुक्सले नै प्रकाशन गरेको सो पुस्तकको मूल्य ३ सय ९५ रूपैयाँ रहेको छ ।
७. काँडामा हाँसेको जिन्दगी
गीतकार कालीप्रसाद रिजाल कविता र गीति लेखनमा लोकप्रिय छन् । उनै स्रष्टा रिजालको संस्मराणात्मक पुस्तक ‘काँडामा हाँसेको जिन्दगी’ नेपालय प्रकाशनले बजारमा ल्याएको छ । नेपाली संगीतको स्वर्णीम युगका गीतकार रिजालका गीत नारायणगोपाल, नातिकाजी र तारादेवीले समेत गाएका छन् । पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा रिजालले दर्शकदीर्घामा उपस्थितमध्ये आफ्नी नातिनी अपूर्वालाई पुस्तक उपहार दिएर कृति लोकार्पण गरेका थिए । उनले नातिनीमार्फत् नयाँ पुस्तामा आफ्नो कथा पुगोस् भन्ने ध्येयले विमोचनको यस्तो शैली अपनाएको बताएका थिए ।
८. धर्सैधर्साको चक्रव्यूह
कवि तीर्थ श्रेष्ठको नयाँ कवितासंग्रह ‘धर्सैधर्साको चक्रव्यूह’ यसै साता बजारमा आएको किताब हो । कविता र गीति लेखनमा ख्याति कमाएका श्रेष्ठ पोखरेली कविका रुपमा समेत चिनिन्छन् । कवि तीर्थले दर्शक दीर्घामा उपस्थितमध्ये अग्रज कलाकार दुर्गा बराल ‘वात्स्यायन’लाई संग्रह उपहार दिएर कृति सार्वजनिक भएको उद्घोष गरेका थिए । कवितासंग्रहलाई नेपालय प्रकाशनले बजारमा ल्याएको हो ।
९. बीपी कोइरालको डायरी
राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार बिपी कोइरालाको संस्मरणहरू नेपाली पाठकमाझ लोकप्रिय छन् । यसै सेरोफेरोमा बिपीका अप्रकाशित संस्मरणहरू समेटेर ‘बीपी कोइरालको डायरी’ नाम पुस्तक बजारमा आएको छ । बीपीले अंग्रेजीमा लेखेका संस्मरणलाई महेश पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् । शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको पुस्तकको मूल्य ३ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ ।
१०. सेतो गुलाब
युवा लेखक अनिश थापाको पहिलो उपन्यास ‘सेतो गुलाब’ले युवा प्रेम र त्यसमा आइपर्ने व्यवधानको कथा उठाएको छ । इन्डिगो इंकले प्रकाशन गरेको उपन्यासमा युवाको विषय उठाइए पनि सामाजीक जीवनका अनेकौं घटनाक्रमलाई उपन्यासमा बुनेका छन् । सो उपन्यासको मूल्य २ सय ५० रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १९, २०७६, ०६:०१:००